Chelsea Oo Iska Xaadirisay Wareega Xiga Ee FA Cup Ka Dib Markii Ay Garaaceen Hull City & Batshuayi Oo Xirtay Kabihii Tammy Abraham | Laacib.net
Chelsea Oo Iska Xaadirisay Wareega Xiga Ee FA Cup Ka Dib Markii Ay Garaaceen Hull City & Batshuayi Oo Xirtay Kabihii Tammy Abraham
January 25, 2020 Balaleti Comments Off on Chelsea Oo Iska Xaadirisay Wareega Xiga Ee FA Cup Ka Dib Markii Ay Garaaceen Hull City & Batshuayi Oo Xirtay Kabihii Tammy Abraham
Chelsea ayaa buukimatay booskeeda wareega 16ka ee koobka FA Cup ka dib markii ay 2-1 ku garaaceen kooxda Hull City oo marti loo ahaa iyadoo Batshuayi uu buuxiyay booskii uu ka dhaawacmay Tammy Abraham halka Tomori uu sii xaqiijiyay guusha.
Blues ayaa guushaan gaartay xilli tababare Frank Lampard uu sideed bedel ku sameeyay shaxdiisii kulankii ugu danbeeyay ee horyaalka Premier League.
Chelsea ayay ku qaadatay kaliya lix daqiiqo inay hogaanka u qabato ciyaarta markii uu Kovacic kubad u qaaday Azpilicueta kaasoo isna garoonka ku soo dhex dhigay xerada ganaaxa, waxaana taabtay Mason Mojnt ka hor inta uusan helin Batshuayi oo shabaqa dhex dhigay.
Waa goolkii lixaad ee uu xilli ciyaareedkan dhaliyo weeraryahanka reer Belgium.
Chelsea ayaa kubada inteeda badan heysatay qeybtii hore laakiin waxaa soo baxayay dhibaatada ay qabeen xilli ciyaareedkan oo dhan oo ah inay ka faa’ideystaan fursadahooda iyadoo Mason Mount iyo Azplicueta ay qarka u fuuleen inay shabaqa soo taabtaan.
Waxaa qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay Blues hogaanka ku heysay.
Hull City ayaa iska qasaarisay fursad fiican oo soo martay daqiiqadii 59aad ee qeybtii labaad ka hor inta aysan Chelsea helin goolkoodii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 64aad.
Ross Barkley ayaa laad xor fiican soo dhex dhigay xerada ganaaxa, waxaana madax ku dhaliyay Tomori oo ciyaarta ka dhigay 2-0.
Waa goolkii labaad ee uu Tomori xilli ciyaareedkan u dhaliyo Chelsea tartamada oo dhan isagoo u saftay 21 kulan, wuxuuna durbaba barbareeyay goolashii uu u dhaliyay Derby County xilli ciyaareedkii la soo dhaafay isagoo u saftay 55 kulan.
Tomori ayaa ku dhawaaday inuu helo goolkiisii labaad daqiiqadii 73aad iyadoo darbadiisii hore uu badbaadiyay goolhaye Long si la mid ah tii ku celiska ee uu fursada u helay.
Hull City ayaa gool soo ceshatay daqiiqadii 78aad markii Alonso uu qalad ku galay xerada ganaaxa afkeeda hore iyadoo Hull City loo dhigay laad xor ah. Waxaa kubada soo qaaday Grosicki laakiin waxay ku dhacday Kovacic taasoo dhinac u goysay goolhaye Caballero ka hor inta aysan kubada shabaqa ku nasanin.